Pele Childhood Story Plus Untold Biography Taken By LifeBogger
Home CLASSIC STARS Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Jona 28, 2017
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno an'ny andian-drakitra iray izay malaza amin'ny anarana; 'Black Pearl.'. Ny tantaran'ny tantaram-pahaterahana ao Pele sy ny tantara tsy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Eny, Izy irery no hany olona mpilalao baolina mihoatra ny sisin-tany. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana tany am-boalohany
Edson Arantes do Nascimiento fantatra amin'ny anarana hoe Pele dia teraka tany Três Corações, Brésil, avy amin'i João Ramos do Nascimento AKA Dondinho (ray) sy Mr Celeste Arantes (Reny).
Lehibe tao an-tanàna izy Três Corações, amin'ny toetry ny Minas Gerais, manodidina ny 200 maily avaratra andrefana Rio de Janeiro. Pele dia teraka tamin'ny naha zanaka voalohany ny fianakaviana Dondinho. Rehefa teraka dia nantsoin'ny ray aman-dreniny azy 'Edison ' taorian'ny inventeur Thomas Edison. Nihalehibe koa izy tamin'ny fananana anaram-batana 2 zaza; "Dico sy Pele". Ny fianakaviany no nanome azy ny anarany "Dico" izay midika Zanaky ny mpiady. Ny papa Pele, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Dondinho, dia noheverin'ny maro ho mpiady amin'ny toerana. Mpilalao baolina kitra izy.
Ny anaram-bositra "Pele" avy amin'ny mpiara-mianatra taminy tany an-tsekoly. I Pele no karazana fifaliana izay tsy manakorontana ny namana mampikorontana sy mampihomehy azy any an-tsekoly. Nitsiky izy na dia taitra aza. Na izany aza, nisy ny fetrany. Nanararaotra ireo fomba fiteniny ratsy ireo namany. Tamin'izany fotoana izany tany an-tsekoly, Pele dia nampiasaina hanonona ny anaran'ilay mpilalao baolina tiany indrindra teo an-toerana Vasco da Gama 'Bile' as "Pile". Ny fomba ratsy nanononany azy io dia nahatonga ny mpiara-mianatra taminy haneso azy. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanome azy ny anaram-bosotra "Pele" amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana ny fiantraikany amin'ny fiarahamonina baolina kitra. Raha ny marina, tsy fantatry ny mpiara-mianatra taminy fa anarana volamena izy io. Anarana omena vazivazy. Ny anarana izay lasa lehibe indrindra, na lehibe kokoa noho ny 99.9% anarana efa fantatr'izao tontolo izao.
Araka ny resadresaka iray, dia niteny i Pele indray mandeha fa ny anarana dia anaran-tsangam-batana kely fotsiny, izay tsy tiany. Rehefa nanontaniana hoe Nahoana? Izany no nolazainy ...
Tsy anaram-boninahitra tiako ho zaza aho. Ny fianakaviako dia nantsoiko hoe Dico, ny vadiko teny an-dàlana antsoina hoe Edson. Rehefa nantsoiny hoe Pelé aho dia tsy tiako izany. Nihevitra aho fa anarana fako io. Ankehitriny dia hitanao ao amin'ny Baiboly izany. Amin'ny teny hebreo dia midika fahagagana i Pele. Nahita izany ny teolojiana, ary nilaza tamiko avy eo. Izay midika hoe, ao anatiny ao amin'ny Baiboly.
Tamin'izany fotoana izany raha nisy olona nilaza hoe "Hey, Pele", dia niantso mafy aho ary tezitra. Indray mandeha aho dia nametaka mpiara-mianatra taminy noho izany ary nahazo faharetana roa andro. Izany, raha ny marina, dia tsy nahitana vokatra tadiavina. Ny ankizy hafa dia nahatsapa fa tezitra tamiko ary noho izany dia nanomboka niantso ahy ry Pele bebe kokoa. Avy eo dia tsapako fa tsy ho ahy ny zavatra antsoiko. Ankehitriny dia tiako ilay anarana - fa hatramin'izao dia tsy maharary ahy izany. "
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny Dream Boyhood
Ny nofinofin'i Pele tamin'ny fahazazany ho lasa mpanamory fiaramanidina dia navotsotra noho ny zava-niseho nampalahelo raha nianjera teo akaikin'ny tranony ny fiaramanidina teo an-toerana, nahafaty ilay mpanamory sy ny mpandeha rehetra tao anaty fiara.
Niala tao an-tranony ny zatovo Pele ary nandeha tany amin'ny hôpitaly mba hijery ny otopsy ary, rehefa nahita ny fatin 'ny pilot, dia nanapa-kevitra izy fa hitsahatra ny nofinofiny. Raha ny marina dia tsy natao ho azy ny asan'ny fiaramanidina.
Raha sitrapony izany, dia nitatra tamin'ny baolina kitra ihany koa ny endriky ny ray aman-dreniny, ary i Dondinho dia lasa mpilalao baolina kitra baolina voalohany an'ny Pele. Pele dia mitantara ny fanohanan'ilay reniny ny faniriany zaza ho lasa mpanamory fiaramanidina. Tsy faly izy nahita azy naka ny baolina kitra.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mitsangàna amin'ny fahantrana
Ny fianakaviany dia voan'ny fahantrana. Pele ny tenany tsy manan-janaka be voninahitra. Tamin'izany fotoana izany, ny vola azon'izy ireo nomena azy dia tsy afaka ny hanome vola baolina mihitsy aza. Amin'ny maha-zazalahy azy, dia efa nilalao i Pele niaraka tamin'ny paompy iray feno taratasy, satria tsy afaka nividy baolina kitra mba hitazonana azy ao an-tranony. Indraindray, nilalao baolina tamin'ny mangona izy nandritra ny fialan-tsasatra. Vokatr'izany dia vola kely monja no azony, i Pele dia tsy maintsy naka asa isan-karazany toy ny zaza mba hahazoany vola fanampiny. Nahazo lesona tany am-boalohany tamin'ny baolina kitra izy tamin'ny alàlan'ny rainy ary nilalao ekipa mpilalao maromaro tamin'ny fahatanorany.
Tsy naharitra ela talohan'ny nahitan'i Pele fa nahazo ny talenta mihoatra ny natokana ho an'ny lalao izy. Izy dia nanomboka tamin'ny baolina kitra an'ny tenany manokana. Izany no noforoniny fony izy nanao ny baolina kitra an-trano. Tany Brezila tamin'izany fotoana izany dia nanjary nalaza ny football indoor.
I Pele no tena hany tompon 'ny firenena manontolo. Izany no nahasambotra azy, nandia fahaiza-manao, haingana sy ny fahaizan'ny fahaiza-manao izay manosika azy ho lasa matoky tena.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Ny rain'i Pele, João Ramos do Nascimento AKA Dodinho dia teraka tamin'ny 2nd of October 1917. Izy no baolina kitra Breziliana nanenjika ny foibe ary tsy hoe ray fotsiny, fa mpanoro hevitra sy namana akaiky an'i Pelé zanany.
Pele (ankavia) sy Ray, Dodinho (ankavanana)
Dondinho dia nilalao ho an'ny fikambanana kely maro nandritra ny taonany. Na dia tsy nanao fahatsapana be toy ny zanany aza ianao, dia nanao zavatra izay tsy azony nokapaina tamin'ny asa ananany ny zanany lahy. Ho fantatrao izany rehefa mamaky ianao.
Tamin'izany fotoana izany tamin'ny andro nilalaovan'izy ireo, ny football dia anisan'ny karama ambany indrindra. Ny tsara indrindra, ny mpilalao baolina dia anisan'ireo mahantra indrindra ao amin'ny firenena. Noho izany dia nahantra i Dondinho. Nisotro ronono izy noho ny nilana vola bebe kokoa tamin'ny asa hafa. Taorian'ny fisotroan-dronono tamin'ny baolina fandaka dia nanao ny asan'ny mpanadio hopitaly i Dondinho ka nanangona vola fanampiny hanampiana ny asan'ny zanany.
Nampianarin'i Dondinho an'i Pele ny fomba handalinana amin'ny fomba mazava, ny fanaovana dribbles, ny fampiasana ny soroka ho an'ny mpamonjy voina, ary ny fiovana haingana ho an'ireo mpiaro ny mpanohitra. Ary mihoatra ny lafiny teknika amin'ny baolina kitra, dia nianatra zavatra i Pele. Nianatra ny fomba hahatonga azy ho lehilahy marina izy rehefa mandany fotoana miaraka amin'ny rainy. Ny tanora Pele dia nahatonga ny fifaliana sy ny fitiavam-bavaka avy amin'ny fifanakalozam-barotra niverimberina niaraka tamin'ny rainy. Ankoatra izany, tiany ny fomba niarahan'ny rainy ny heviny, toy ny hoe lehilahy izy.
Raha niasa tao amin'ny paroasy i Dondinho, dia nahatsiaro ireo mpilalao malaza izay niatrika azy izy ary niresaka momba ny zokiny lahy, izay nampiseho fampanantenana mahatalanjona ho mpilalao baolina saingy maty tany 25.
Tsy feno ny ankamaroan'ny asany. Na izany aza fantatsika fa tao anatin'ny roa ambinifolo taona teo ho eo ny toeran'ny baolina kitra tao Brezila, dia nitantana ny tanjona 893 tao amin'ny lalao 775 i Dondinho, afa-tsy ny 19 amin'ny kilalao 6 ho an'i Brezila.
Dondinho dia laharan-tariby 9 ary ny zanany lahy Pele no laharana 10. Nifidy ny anjara toerana lalindalina kokoa i Pele mba ahafahany mandrindra ny fanafihana sy manohana azy.
Izao no rakitsoratra. Dondinho indray mandeha dia nanao tanjona dimy tamin'ny lohany tamin'ny lalao iray. Pelé dia niezaka foana ny nandresy ity rakitsoratra ity fa tsy afaka nanatontosa ny asany. Dondinho nitarika tanjona dia mbola mitoetra ho rakitsary tsy ofisialy manerantany ary feon-javatra iray izay tsy hinoana mihitsy i Pele. Rehefa nanontaniana momba izany i Pele dia niteny indray mandeha; "Andriamanitra irery ihany no afaka manazava ny nataon-draiko."
Ny famirapiratan'i Dondinho dia tsy azo ambara eto raha nahatsiaro azy isika raha nanoratra momba ny zanany lahy Legendary 'Pele'. Niaina nandritra ny taona 89 i Dondinho. Maty tamin'ny 16 November 1996 tao São Paulo izy.
rENY: I Pele dia nanana renim-pianakaviana malaza antsoina hoe Mr Celeste Arantes. Mpivahiny indray izy alohan'ny hivadika ho vady feno trano. Voalaza fa ao ambadiky ny lehilahy lehibe dia vehivavy lehibe kokoa. Ity tranga ity, renim-pianakaviana lehibe izany.
"Mahafinaritra ny reniko," hoy i Pelé. "Nokarakaraiko foana ny fianakaviako sy ny fianarako, ary nampianarany ahy ny fomba hanajana ny olona. Nomeny fahafahana hianatra ny fomba hanajana ny olona aho. "
Tena nifanakaiky be toa an'i Pele koa izy ireo teo akaikin'ny rainy. Mahaliana fa ny reniny dia tsy teo am-bavahady niaraka tamin'ny Pelé kely nanjary mpilalao baolina kitra. Dona Celeste, izay mijery foana ny zanany, nahita baolina kitra toy ny a "Fanenjehana maty" ary "Lalana ahazoana fahantrana." Tiany hifantoka amin'ny fianarany i Pelé.
Izy dia tahaka ny anjely nipetraka teo an-tsorok'i Pele, namporisika azy hatrany hanao ny tsara, ny fitondran-tena, ny zava-manorina. Araka ny voalazan'i Pele, "Tamin'ireny taona voalohandohany ireny, fony izy nisambotra ahy nilalao baolina dia nanome baiko fitenenana tsara izy. Indraindray aza dia ratsy kokoa! "
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ny fanambadiany voalohany dia niaraka tamin'i Rosemeri dos Reis Cholbi tao amin'ny 1966.
Nahazo vavy roa vavy ireo mpivady ireo. Nisaraka tamin'ny 1982 izy ireo. Nanomboka tamin'ny 1981 hatramin'ny 1986, dia navitrika tamin'ny Xuxa izy, izay nanampy azy ho modely. Xuxa dia taona 17 taona fony izy ireo vao nanomboka.
Tao amin'ny 1994, dia nanambady psikologista sy mpihira filazantsara Assíria Lemos Seixas izy. Pelé dia nirotsaka ny ranomasony rehefa nahatsiaro ny nahafatesany nandritra ny fampakaram-badiny niaraka tamin'i Assiria Seixas Lemos tamin'ny Aprily 30, 1994 tany amin'ny morontsirak'i Recife, Brezila.
Mihoatra noho ny governemantan'ny fanjakana 170 niambina ny mpivady sy ireo vahiny 300 tao amin'ny Fiangonana Episcopal Anglikana. Io no fanambadiana faharoa ho an'ny roa tonta. Niteraka kambana, Joshua sy Celeste. Nisaraka tamin'ny 2008 izy ireo.
Tamin'ny volana 2016, Pele, 75, dia nanambady an'i Marcia tamin'ny fombafomba ara-pivavahana kely tany Guaruja teo amoron-dranomasin'i Sao Paulo, Brezila.
Ny kintan'ny pôpitaly misotro ronono dia nifandray tamin'i Marcia nandritra ny enin-taona talohan'ny fanambadian'izy ireo.
Raha toa ka misy fomba fiaina, dia mety ho tsapa ny toetran'i Pele. Voalohany, tia mamorona sary izy. Ity ambany ity ny Pelé miavaka eo anoloan'ny Mercedes-Benz amin'ny 1970. Ny sariny marefo dia mety tsara, satria ny lalao teny an-kianja dia nanome azy ny anaram-bosotra hoe "O Rei Pelé," izay midika hoe "The King Pelé."
Raha miresaka momba ny fomba fiainana, dia ilaina ny fanamarihana hafa. Tiany ny milalao ny gitara ataony. Ao amin'ny sary etsy ambany, i Pelé dia miala amin'ny dobo misy hotely miaraka amin'ny gitara taorian'ny Mondial 1970 tany Meksika. Ny fifanintsanana dia mozika ho an'ny sofiny, araka ny filazan'i Brezila ny fiadiana ny amboara eran-tany fahatelo.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Taratasy Media & Toe-karena Manerantany
Pelé dia mitsiky rehefa manasa lamba ao amin'ny efitra fandroana amin'ny volana Mey 1963. Izy no lasibatry ny media na aiza na aiza nalehany, ka nanjary mpilalao baolina kitra malaza indrindra hatramin'izay.
Ny governemanta Breziliana dia nanambara ny harenam-pirenena ofisialin'i Pelé ao amin'ny 1961 mba hisakanana azy tsy hivoaka ny firenena.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fitiavana an'i Neymar
Samy namana tsara izy ireo ary tsy azo sarahina. Araka ny filazan'i Neymar, "Ny fiodinam-piainako teo amin'ny fiainan'ny mpanjaka baolina kitra dia niantso ahy voalohany i Pele. Nolazainy tamiko ny hamono an'i Chelsea ". Neymar dia nalaina sary an-tsehatra niaraka tamin'ny angano. Pele mino Neymar dia tsy maintsy manatsara ny làlan-dohany ihany koa izy mba hanapahana ny lalao mpitarika ny kianja Real Madrid, Cristiano Ronaldo.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Nanafika ny afo ny ady an-trano
Mba hitazonana ilay vola mihodina, ampahany handoavana Pele ny ny karama, ny ampahany mba hahazoana vola ho an'ny klioba amin'ny tombony azony, Santos dia nitsidika an'izao tontolo izao nilalao namana be mpividy, tamin'ny fividianany ny tranon'izy ireo. Fitiavana iray Lagos, Nizeria dia nanosika ireo antoko roa tao amin'ny Ady an-trano nizeriana mba hiantso ny fanoherana 48 mba ahafahany mijery azy milalao. Nijery ny andian-tafika mpihoko federaly Nizeriana sy Biafrana ireo mpijery i Pele tamin'ny fitsidihany ny firenena niaviany. Gaga i Pele rehefa nahita an'i Nizeria voalohany.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny asa aman-draharaha taloha sy ny zava-bita
Pele dia nosoniavin'i Santos fony izy 15. Nahazo tanjona efatra izy tao anatin'ny laharam-pivondron'ny liginy nandritra ny lalao tamin'ny FC Corinthians tamin'ny volana septambra 7, 1956.
Nahazo tombontsoa izy na dia nandritra ny fahatanorany aza, nitarika ny ekipa Nasionaly 1958 Breziliana tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany tamin'ny lalao baolina kitra tao Suède tamin'ny taona 17.
Tao amin'ny 17, i Pele no lasa mpandresy tamin'ny Mondialy. Izy koa dia nitifitra indroa tamin'ny farany teo amin'ny sisintanin'i Soeda. Ny tanjony voalohany izay nandosirany ny baolina teo amin'ny mpiaro iray teo aloha volleying tany an-joron'ny harato, no nofinidy ho anisan'ny tanjona tsara indrindra amin'ny tantaran'ny Fiadiana ny amboara eran-tany.
Taorian'ilay tanjona faharoa nataon'i Pelé, mpilalao Soedoà Sigvard Parling dia haneho hevitra avy eo; "Rehefa namono ny tanjon'ny fahadimy tamin'ity farany ity i Pelé, tokony ho marin-toetra aho ary milaza fa tsapako fa"
Tao amin'ny World Cup 1958 no nanamboaran'i Pelé akanjo maromaro tamin'ny 10.
Pelé koa nilalao tao amin'ny Championship South America. Ao amin'ny 1959 fifaninanana Nantsoina hoe mpilalao mahay indrindra izy ary mpilalao ambony indrindra tamin'ny tanjona 8, satria faharoa i Brezila na dia tsy tafiditra tao anatin'ny fifaninanana aza.
Mpilalao marika fanta-daza, fantany ny fahaizany miandry ny mpanohitra ao amin'ilay faritra ary hamita ny sombin-tsakafo amin'ny tifitra tsara sy mahery amin'ny tongotra.
Ny loko miavaka nataon'i Pele
Ao Santos, ny 19 Novambra dia fantatra amin'ny hoe 'Pele Day' hankalaza ny tsingerin-taonan'ny tanjona 1,000th.
Pele dia fahadimy amin'ny lisitry ny lalao mondialy amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny 12 - ary ny Breziliana faharoa ambony indrindra ao ambadik'i Ronaldo.
Rehefa nisotro ronono i Pele dia nilaza i JB Pinheiro, masoivoho Breziliana ao amin'ny Firenena Mikambana: "Pele dia nilalao baolina ho an'ny 22 taona, ary tamin'izany fotoana izany dia nanao bebe kokoa izy mba hampiroboroboana ny fisakaizana sy ny firahalahiana maneran-tany noho ny ambasadora hafa na aiza na aiza."
Pele dia nanao baoty 92, ary nahazo tanjona efatra tamin'ny fotoana nisehoan'ny 31, in-dimy isa enina, ary indray mandeha isaky ny lalao iray. Ary maro tamin'ireo tanjona napetrak'i Pele no voatifitra tamin'ny baolina mitaingina bisikileta.
Pele: Ilay Mpitarika Kick Bicycle
Pele dia nanatratra tanjona telo na maromaro izay nipoitra 129 nandritra ny asany. 1 amin'ny tanjona momba ny asa. 1, 280 amin'ny 1, lalao 360. Izy ihany koa no mihazona ny rakitsoratra manerantany ho an'ny trosa. 92 tanteraka. Tsy nino ny sazy i Pele. Hoy izy indray mandeha: "Ny sazy dia sazy kanadianina."
Tao amin'ny 1997, dia nomena Knightthood Britanika nalaza i Pele. Izy no voatendry ho Minisitry ny Fanatanjahantena any Brezila ao amin'ny 1995, manompo hatramin'ny 1998. Nofinofin'ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena (IOC) tamin'ny 1999 izy io. Navoakan'i Pele tao amin'ny Hall of Fame National tamin'ny 1999.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Priceless Jersey
Rehefa nilalao ho an'ny New York i Pele, dia maro tamin'ireo mpanohitra azy no naniry ny hanakona ny akanjo miaraka aminy fa ny klioba dia tokony hanome ny akanjon'izy ireo tsirairay avy aorian'ny fety tsirairay. "Pele no tena nahasarika ahy," hoy i Gordon Bradley, iray amin'ireo mpanazatra ny klioba tamin'izany fotoana izany. "Indraindray izahay dia tsy maintsy naka ny 25 na ny 30 ny akanjontsika ho an'ny lalao - raha tsy izany dia tsy mbola tafavoaka velona tamin'ny kianja izahay."
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tsy naman'i Maradona
Pele sy Maradona dia tsy mpinamana. Ao amin'ny 2010, niteny i Pele mikasika ny Arzantina: "Tsy ohatra tsara ho an'ny tanora izy. Nahazo fanomezana nomen'Andriamanitra izy satria afaka milalao baolina kitra, ary izany no mahatonga azy ho vintana. "
Ny valintenin'i Maradona: "Iza no mikarakara izay nolazain'i Pele? Anisan'ny tranombakoka izy. "
Ny fifaninanana Pele / Maradona
Hoy i Pele tao amin'ny 2006: "Ho an'ny 20 taona dia nanontany ahy ny fanontaniana iray ihany izy ireo, iza no lehibe indrindra? Pele na Maradona? Averiko fa ny zavatra rehetra tsy maintsy ataonao dia ny mijery ny zava-misy - firy ny tanjona nanatsarany ny tongony havanana na ny lohany? "
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ambasadaoron'ny Firenena Mikambana
Mpanao solontena iray sy solontenan'ny mpilalao iray, Pelé dia nandrisika ny hetsika fanoherana ny zava-mahadomelina talohan'ny lalao miaraka amin'i Diego Maradona sy Michael Platini amin'ny volana 23, 1988 any Frantsa. Nampiasa ny lazany izy mba hampisy fahasamihafana aorian'ny baolina kitra, izay manamboninahitry ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana.
Pele: Ambasadaoron'ny Firenena Mikambana
Pele dia niasa ho ambasadaoron'ny UNICEF Goodwill ary toy ny masoivohon'ny Firenena Mikambana, miasa hiarovana ny tontolo iainana sy hiady amin'ny kolikoly any Brezila.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Lahatsary iray nomena anarana nomeny
Nanana lahatsary video antsoina hoe Pele ny anaran'i Pele taorian'ny anarany tany amin'ny 1980s antsoina hoe 'Pelé's Soccer'. Ny lalao baolina kitra ho an'ny Atari 2600, ary mety ho ilay lalao video mihetsiketsika tranainy indrindra. Ny lalao dia ahafahanao manatratra tanjona manerana an'i Amerika Atsimo.
Piel's Game Game
Amin'ny fanatontosana azy dia manomboka eny an-dalamben'i Brezila aloha ianao, ary mamoaka feon-tsofina hialana amin'ny gorodona. Avy eo dia mamakivaky tanàna vaovao eny an-dalana mankany amin'ny kianja lehibe.
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fampiroboroboana ny fiaramanidina
Raha niomana ny hisintaka amin'ny lalao iray nandritra ny 70 any Meksika i Pele dia nitazona ny mpitsidika fa mila mamehy ny kirarony izy. Ny fakantsary najanona mba hanambarana ny fiakaran'ny Puma ho avy - ny orinasa dia niaina fivoarana goavana goavana.
Jona 16, 2018
Ny tantaran'i Adriano Childhood Plus untold
Oktobra 8, 2017